Sekoly ambony CNTEMAD Hanomboka ny 18 novambra ny fanadinana
Ankilimarovahatse - Amboasary Atsimo Ankizy miisa valo matin’ny hanoanana
Mamely ny kere any atsimo. Mihantona ny orana. Tsy misy antenaina ny vokatry ny fambolena. Atao varoboba ny biby fiompiana mba hividianana rano sy sakafo.
Besarety sy ny manodidina Manahy ny ho dobo rano rehefa fahavaratra
Miomana amin'ny fotoam-pahavaratra 2020/2021 ny SAMVA sy ny Ministeran'ny Rano sy Fidiovana ary Fahadiovana. Natomboka omaly Alatsinainy 28 septambra 2020 tetsy Besarety sy ny manodidina ny fanadiovana tatatra sy lakandrano eny an-toerana.
Fanalan-jaza an-tsokosoko Vehivavy 3 isan'andro no mamoy ny ainy
Manaitra ny sain'ny maro Rtoa Estelle Razanadrakoto, sekretera jeneralin'ny CNFM (Filan-kevitra nasionalin'ny vehivavy eto Madagasikara),
Taorian’ny fanafoanana ny fanadinam-panjakana Cntemad izay nifanindry tamin’ny fanadinam-panjakana Bakalôrea fiodinana faharoa manokana farany teo dia fantatra fa hotanterahina tsy ho ela izany taorian’ny fandaminana
ireo efitranom-panadinana notanterahin’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny eo anivon’ny sekoly.Hotanterahina manomboka ny 18 novambra ho avy izao izany haharitra efatra andro. Fanadinana famaranana amin’ity taom-pianarana ity ho an'ireo mpianatry ny Cntemad manerana ny Nosy no hotontosaina amin’ireo andro ireo, raha araka ny fanadihadiana natao. Ho tonga tsy ho ela eny an-tanànan’ireo mpiadina araka izany ny taratasim-piantsoana hahafahan’ny rehetra miomana.